Inona ny fahefana maivana horaisina: ny torohevitra tsara indrindra | Green Renewable
Inona no herin'ny jiro hanakarama
Rahoviana isika no hahita inona ny herin'ny jiro hanakarama, Ilaina ny mahafantatra ny fandidiana rehetra momba azy io mba tsy handaniantsika vola ary hanana fandaniana tsy ilaina na tsy hianjera ary mitsambikina matetika ireo mpitarika. Ny fahalalana ny herin'ny jiro hakana vola dia tena ilaina amin'ny fandanjana fotsiny amin'ny hazavana sy ny fandaniantsika kely ny herinaratra.
Noho izany, amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao hianaranao ny herin'ny hazavana hajaina.
1 Inona no atao hoe herinaratra
2 Fanontaniana napetraka matetika momba ny fahefan'ny jiro hanakarama
3 Fitsipika hianarana inona ny herin'ny hazavana horaisina
4 Iza sy ny fomba voafantina ny fahefana
Inona no atao hoe herinaratra
Raha te hahalala izay herin'ny hazavana hofaina dia tsy maintsy fantarintsika aloha ny dikan'io hevitra io. Ny hery dia ny habetsaky ny angovo vokarina na lanina isaky ny vanim-potoana. Ity fotoana ity dia azo refesina amin'ny segondra, minitra, ora, andro ... ary ny hery dia refesina amin'ny joules na watts.
Ny angovo azo avy amin'ny alàlan'ny mekanika elektrika dia mandrefy ny fahaizana mamorona asa, izany hoe ny karazana "ezaka" rehetra. Mba hahalalana bebe kokoa azy dia andao hametraka ohatra tsotra momba ny asa: manafana rano, manetsiketsika ny lelan'ny mpankafy, mamokatra rivotra, mihetsika sns. Izany rehetra izany dia mitaky asa izay maharesy ny hery mifanohitra, ny hery toy ny hery misintona, ny herin'ny fikororohana amin'ny tany na ny rivotra, ny mari-pana efa misy eo amin'ny tontolo iainana ... ary io asa io dia amin'ny endrika angovo (angovo herinaratra, mafana, mekanika ...).
Ny fifandraisana misy eo amin'ny angovo sy ny hery dia ny taha lany amin'ny angovo. Izany hoe, ahoana ny refesina ny angovo amin'ireo joule lanin'ny isam-potoana. Ny joule tsirairay isaky ny segondra dia iray watt (watt), ka io no refy fandrefesana ny herinaratra. Koa satria watt dia singa kely dia kely, kilowatts (kW) no ampiasaina matetika. Rehefa hitanao ny volavolan-dalàna momba ny herinaratra, ny fitaovana ary ny sisa dia ho tonga ao amin'ny kW izy ireo.
Fanontaniana napetraka matetika momba ny fahefan'ny jiro hanakarama
Ny sasany amin'ireo fanontaniana matetika napetraka indrindra rehefa ilaina ny mahafantatra hoe inona ny herin'ny jiro hanakarama dia mifandraika amin'ny fahita matetika izay mitsambikina rehefa misy fanjifana hafa noho ny mahazatra na satria tsy misy jiro raha mampifandray herinaratra maromaro isika fitaovana miaraka amin'izay koa.
Ary ny hamaliana ireo fanontaniana rehetra ireo dia ilaina ny manondro ny isan'ny fitaovana elektrika ao an-tranontsika. Tsy maintsy raisina fa miankina amin'ny lafin-javatra maro ny herinaratra. Ny fananana trano lehibe kokoa na kely kokoa dia tsy zava-dehibe, satria azo atao ny mipetraka amin'ny trano somary midadasika miaraka amin'ny fitaovana kely. Mety hitranga koa ny mifanohitra amin'izay. Ny trano iray dia mety manana fitaovana elektrika ampy sy faritra kely amboniny ary mila manana herinaratra bebe kokoa.
Raha te hahalala hoe inona ny herin'ny jiro hanakaranao dia mila fantatrao ny isan'ny fitaovana anananao ao an-tranonao ary raha hampiasa izany ianao na tsia amin'ny fotoana iray.
Fitsipika hianarana inona ny herin'ny hazavana horaisina
Ho hitantsika hoe inona ny fitsipika voalohany sy lehibe tsy maintsy raisina mba hahalalana hoe inona ny herin'ny jiro.
Arakaraka ny maha avo ny herinaratra nifanarahana, no avo kokoa ny vola raikitra tsy maintsy aloa. Zava-dehibe iray tokony hodinihina ity satria tsy afaka mihoatra ny herinaratra nifanarahana isika satria handoa bebe kokoa. Ny hevitra dia ny hianarana bebe kokoa na latsaka ny fandaniana ho azonao ary manakarama izay ilaina mba hanomezana fahafaham-po an'io fangatahana herinaratra io.
Ny fananana fahefana kely nifanarahana dia tsy midika hoe hanana tahiry bebe kokoa isika. Mazava fa isaky ny kW ianao dia midina amin'ny fifanarahana dia hitahiry 50 euro isan-taona. Na izany aza, hanjavona daholo na tahiry raha tsy mahay mampiasa fitaovana marobe miaraka amin'izay ianao. Tsy misy olona te handany ny fotoana rehetra mankany amin'ny boaty fidirana satria mitsambikina hatrany ny ICP. Tsy manana jiro intsony ianao amin'ny famohana ny lafaoro amin'ny fotoana anaovanao milina fanasan-damba ary mety ahazoana aina loatra izany raha mitranga matetika izany.
Raha mitranga izany dia mila mampitombo ny fahefana nifanarahana ianao, na dia vola kely aza no laniko. Ny fitehirizana ny fihenan'ny herinaratra nifanarahana dia mety ho lafo kokoa raha tsy mandinika azy ireo tsara ianao.
Hery ny fampahalalana ary na dia afaka manapa-kevitra ianao hoe inona no hokaramaina, zava-dehibe ny fahalalana tsara. Misy fetra voafaritra noho ny antony fiarovana rehefa mampitombo ny herinaratra. Izany hoe tsy ny fametrahana herinaratra rehetra amin'ny toerana misy ny trano no manohana hery lehibe. Raha mila mihoatra ny fetra mamela anao hanavao ny fametrahana tanteraka ianao. Raha tsy izany dia mety hitranga ny loza tsy ilaina.
Raha ny fampihenana ny herinaratra dia manana ny teny farany ihany koa ianao. Na izany aza, marihina fa raha tsy manana fahefana ianao dia ianao no mijaly amin'ny tsy mahazo aina amin'izany. Azonao atao ny mampihena na mampiakatra ny herinaratra araka izay itiavanao azy, raha mbola marobe ny 0.1 kW no hita. Raha mandany amin'ny fampidinana ny fahefana nifanarahana ianao amin'ny farany, ny vidin'ny fampiakarana azy indray dia midika fa ny tahirimbola rehetra dia nampiasaina tamin'ny tsy nisy.
Iza sy ny fomba voafantina ny fahefana
Ny mpanjifa dia miandraikitra ny fanekena ny orinasa momba ny fahefana horaisina. Ny zavatra mahazatra indrindra dia ny orinasa mihitsy no manao tolo-kevitra mifototra amin'ny fametrahana azy sy ny isan'ny fitaovana. Amin'ny farany, ianao no manana ny teny farany ary afaka manakarama ny vola tadiavinao ianao. Ny mpaninjara dia tsy maintsy manaiky fanovana iray monja amin'ny herinaratra herinaratra isan-taona, na dia azo ovaina arakaraka ny filanao aza. Miharihary fa tsy azonao atao ny manova ny heriny nifanarahana isam-bolana.
Raha te hahalala raha nanakarama ianao dia misy tetika iray tsy mahomby. Alefao miaraka amin'izay ny fitaovana elektrika ao an-tranonao. Raha eo amin'ireo fitaovana ireo no ahitanao ny lafaoro, ny fifehezana ny rivotra ary ny fanadiovana banga, na dia tsy mitsambikina aza ny ICP, dia angamba ianao nanana hery nifanarahana be loatra. Ny fotoana izay tokony hampifandraisanao ny ankamaroan'ny fitaovana elektrika rehetra amin'ny fotoana mitovy ao an-tranonao dia vitsy dia vitsy na tsy mandeha. Tsy mila miomana amin'izany ianao. Mandoa zavatra izay tsy mbola ampiasainao na sarotra aza ianao. Ho hita taratra amin'ny faktioran'ny herinaratra izany rehetra izany.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny herin'ny jiro handray trano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Inona no herin'ny jiro hanakarama
Haingo haingo Krismasy
Voninkazo lany tamingana